कति मा ... चीन जारी छ जो डलर, मा सेन्ट?
कति सेन्ट डलर मा, पैसा प्रयोगमा छन् जो देश आधारमा। Commoners यो मुद्रा अमेरिकी छ भनेर थाहा, तर एउटै नाम संग मौद्रिक एकाइहरु साधारण हो वास्तवमा संसारको लगभग सबै भागमा।
सुरु, सायद, यो अलग महादेशमा झूट गर्न आवश्यक छ - सम्बोधन जो अष्ट्रेलिया, ओस्ट्रेलियन डलर, रिजर्व बैंक उत्पादन। साथै, एक ठूलो राज्य, यस्ता देशहरूमा (क्षेत्रहरूमा) नाउरू, क्रिसमस आइल्याण्ड, किरिबाती, तुभालु, रूपमा परिसंचरण मा पैसा कोकोस , र अन्य। जो एक सय को नै मौद्रिक एकाइ छ, सेन्ट मा डलर विभाजित छ।
त्यसपछि तपाईं बार्बाडोस डलर, बेलिज, बहामास र बर्मुडा राज्य, जहाँ एउटै नाम डलर (बेलीज, बहामास, आदि) को ठेगाना, स्थानीय केन्द्रीय बैंकहरू द्वारा तारीख कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै नाम दक्षिण पूर्व एशिया मा ब्रुनाई को राज्य को मौद्रिक एकाइ, दुनिया को अन्य पक्षमा स्थित छ।
कति क्यारेबियन क्षेत्रमा उत्पादन र पूर्वी क्यारेबियन रूपमा जानिन्छ जो डलर, मा सेन्ट? यो यस्तो Granada, सेन्ट लुसिया, सेन्ट किट्स डोमिनिक, आङ्गुइला रूपमा देशहरूमा सार्न भनेर बाहिर जान्छ सानो सिक्का सेन्ट, एक स्थानीय छ - डलर 100 एकाइहरु। निस्सन्देह, तिनीहरूले माथि उल्लिखित सेन्ट को कुनै पनि को उपस्थिति र मिश्र मा फरक।
यस्तो नामिबिया र जिम्बाब्वे रूपमा डलर देशहरूमा छन् तिनीहरूले पार-पत्र को उपसर्ग एन र Z, क्रमशः संग "एस" को एक अन्तर्राष्ट्रिय पद रूपमा छ कि रोचक। तिनीहरूले पनि एक सय सेन्ट समावेश गर्दछ।
केही मानिसहरू सोलोमन द्वीप द्वारा जारी डलर मा कति सेन्ट, थाहा छ। र पनि कम मान्छे जानकारी छ कि स्थानीय परिसंचरण, फरक फारम dodecagonal "स्टार" संग पचास-प्रतिशत सिक्का छ। यी मौद्रिक एकाइहरूको दुई बस एक डलर मात्रा हुनेछ। साथै, त्यहाँ खोल्दै हुनुहुन्छ पाँच, दस र dvadtsatitsentoviki।
र अन्तमा, सबै भन्दा अमेरिकी डलर को व्यापक सम्बन्ध मा मुद्रा प्राप्त जो प्रश्न "$ 1 - कति सेन्ट?" सामान्यतया यो उत्पन्न गर्दैन, अर्थात्। एक। सबैलाई थाह छ। यो आधारमा एक मौद्रिक र आर्थिक सम्बन्ध निर्माण ब्रिटिश द्वीपहरु, गुवाम, माइक्रोनेशिया, को मार्शल द्वीप, पलाउ, अमेरिका, पोर्टो रीको, सेन्ट ईउस्टाटिउस, साबा को संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्क, काइकोस टापु, इक्वेडर, र अन्य एकदम विदेशी क्षेत्रहरूमा गर्न।
"चीन तिर्न कति डलर मा सेन्ट गर्न": प्रश्न द्वारा सायद कसैले हैरानी? यो देश को मुद्रा युआन मा प्रतिनिधित्व छ किनभने। तथ्यलाई चीन को जनताहरु गणतन्त्र द्वारा केहि समय को लागि अब त्यहाँ नयाँ ताइवान डलर, जसमा सय सेन्ट छ जहाँ ताइवान, जोडिएको छ। स्वाप एकाइहरूको कुनै फरक रकम र न्यूजील्याण्ड डलर, भएको recourse को कुक टापुहरू, न्यूजील्याण्ड र तोगो र पिटकाइर्न अधिकांश मा।
यो बाहिर जान्छ कि डलर एक सय सेन्ट - सबै देशहरूमा जहाँ एउटै नाममा हालै साधारण मुद्रा। तर, त्यही नाम अन्तर्गत यी मुद्राहरू विभिन्न विनिमय दर सम्बन्ध मा छ, उदाहरणका लागि, रूसी रूबल र उत्सर्जन को विभिन्न मात्रा।
सपा लागि NACE कोड
मास्को मा minibuses बन्द। मास्को सुधार मा यात्री यातायात: निहितार्थ
औसत मासिक तलब, शुल्क प्रकार
अभिनव: सार विशेषताहरू, वर्गीकरण
Sverdlovsk रेलवे: योजना, व्यवस्थापन र संग्रहालय
क्यालोरी खरबुजा र यसको अद्वितीय गुण
कसरी बच्चा पौडी खेल्न सिकाउन?
आफ्नो हातमा 20 कुखुरा लागि चिकन Coop। एक चिकन Coop न्यानो कसरी निर्माण गर्न
अनन्त बालुवा: लोक चिकित्सा मा प्रयोग बिरुवाहरु को विवरण
गैस्ट्रिक बेलुन: मूल्य समीक्षा। को गैस्ट्रिक बेलुन स्थापना को लागि प्रक्रिया
कार्यकारी शक्ति संघीय शरीर को सिस्टम मा समावेश ... के रूसी संघ को कार्यकारी शक्ति संघीय शरीर को सिस्टम मा समावेश गरिएको छ?
छोराछोरीको Intracranial दबाव। लक्षण, कारण, उपचार